ထောပတ်အမဲသားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်နှေးသောချက်ပြုတ်နည်း (ဗီဒီယို) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဒါ Corned Beef and Cabbage Slow Cooker စာရွက် ပြောင်းဖူးအမဲသား၏အရသာရှိရှိသမျှကိုသူ့ဟာသူချက်ပြုတ်သည့်အစာအဖြစ်ထုပ်ပိုးသည်။ နူးညံ့သောပြောင်းဆန်အမဲသား၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုန်လာဥနှင့်အာလူးအားလုံးသည် Crock Pot ၌စုံလင်စွာချက်ပြုတ်ထားသောကြောင့်မလုံလောက်သောအစားအစာဖြစ်သည်။
ငါမကြာခဏ 'ပြောင်းဖူးအမဲသားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးစာရွက်ကဘာလဲ' ငါသည်ဤနှေးကွေးနေသောချက်ပြုတ်စာရွက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ကိုဝန်ခံရမည်။
ဒါ Crock Pot Corned အမဲသားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်စာရွက် အကောင်းဆုံးတစ် ဦး အတွက်ချက်ပြုတ်ဖြစ်ပါတယ် 6QT နှေးကွေးသောထမင်းပေါင်းအိုး (သို့မဟုတ်ပိုကြီးသည်) ဒါကြောင့်တကယ် crock ဖြည်အဖြစ်။ သင့်ရဲ့အာလူးတွေကိုချက်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာနာရီအနည်းငယ်ထည့်ပါ၊ ဒါကြောင့် ၅-၆ နာရီခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။ ထမင်းမစားခင် ၂ နာရီအကြာမှာဂေါ်ဖီထုပ်ထည့်ပါ။
သင်ယခင်ကပြောင်းဖူးအမဲသားကိုတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဖူးလျှင်၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသော်လည်း၎င်းကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ပြောင်းဖူးအမဲသား (နှင့်အမဲသား brisket) သည်သင့်လျော်သောချက်ပြုတ်သည်အထိအသားဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲလျှင်၎င်းသည်ကြာရှည်စွာမချက်ပြုတ်နိုင်သေးပါ၊ ၎င်းကိုနှေးသောမီးဖို၌ချန် ထား၍ ၎င်းကိုအနည်းငယ်ပိုအချိန်ပေးပါမည်။
ခုတ်ဖြတ်ခြင်းမပြုမီသင်ကသင်၏အမဲသားကိုငြိမ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ တစ်ကြိမ်နားပြီး စပါးကိုဆန့်ကျင်ဖြတ် သစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်အရသာပိုသောပြောင်းဖူးအမဲသားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
(ဒီ crock poted corned beef recipe အပါအဝင်) မည်သည့် brisket စာရွက်လုပ်သည့်အခါသတိထားရမည့်သင်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအကြံဥာဏ်အချို့ရှိပါသည်။
နူးညံ့အောင်ပြုလုပ်ရန် Corned Beef ကိုချက်ပြုတ်နည်း
Low & Slow: Brisket သည်အလွန်ခက်ခဲသောအသားဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်အတွက်၎င်းကိုအနိမ့်ကျစွာနှေးအောင်လုပ်သင့်သည်။ ဒီစာရွက်ထဲမှာငါနှေးကွေးတဲ့ cooker ကိုသုံးပြီးငါအနိမ့် setting ကိုအသုံးပြုရန်သေချာပါစေ။
အချိန်ပေးပါ ဤသည်နောက်ကျော 'နှေးကွေး' တတ် ... ဒီစာရွက် 8-10 နာရီခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်သတ္တုတွင်းများသောအားဖြင့် 10 မှပိုမိုနီးကပ်စွာကြာသည်သင်၏ corned အမဲသားခက်ခဲသည်ဆိုပါကရှည်လျားအလုံအလောက်ချက်ပြုတ်မကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
စပါးကိုဖြတ်ပြီးဖြတ် Brisket တွင်အမျှင်ရှည်များရှိပြီးထို့ကြောင့်စပါးကိုဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တကယ်တော့ဒီစာရွက်၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် !!
ထောပတ်အမဲသား ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံရပြီးမွေးမြူထားသောအမဲသား brisket ဖြစ်သည်။ ရောင်းသည့်အခါမကြာခဏပြီးသား seasoned သို့မဟုတ်တစ် ဦး အရသာ packet ကိုအတူလာပါတယ်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များအပါအ ၀ င်လှပပြီးမွှေးသောနံ့သာမျိုး၊ သင်၏ Corned အမဲသားတွင်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များမရှိပါကသင်ဇွန်းနှစ်စုံထည့်နိုင်သည် နံ့သာမျိုး အနည်းငယ်ငရုတ်သီးနှင့်ပင်လယ်အော်အရွက်။ သူတို့ကို cheesecloth ဖြင့် စုစည်း၍ မီးဖိုချောင်ထဲသို့နှင်ချလိုက်ပါ။
စိန့်ပက်ထရစ်နေ့သည် Corned Beef နှင့် Cabbage တို့ကဲ့သို့သောလွယ်ကူသောနှေးကွေးသောချက်ပြုတ်နည်းကိုပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ Crock အိုးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤအစားအစာကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
ဒါ အနှေး cooker Corned အမဲသားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်စာရွက် သင်၏မိသားစုကချစ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြင်နာပြီးအရသာရှိသောညစာတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောမုန့်ညက်ပြီးသားကတည်းကကျနော်တို့အများဆုံးနှင့်အတူကဝတ်ပြုကြလော့ မိနစ် ၃၀ မိနစ်ညစာစား သို့မဟုတ်လွယ်ကူသောအိမ်လုပ်ထောပတ်အသားကင်နှင့်ရိုးရှင်းသောဘေးထွက်အသုပ်။
မင်းဒီနှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ချင်တဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်။ ဤလွယ်ကူသောပြောင်းဖူးအမဲသားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်စာရွက်တွင်အားလုံးသောနူးညံ့သောပြောင်းဖူးအမဲသား၊ အာလူး၊ မုန်လာဥနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်တွင်အပြည့်ပါသောမုန့်ညက်ပါဝင်သည်။
Lamb Stew (Irish Stew) - ဒါကြောင့်ကြွယ်ဝသောနှင့်အရသာ!
Corned Beef (Stove Top) ချက်ပြုတ်နည်း - မီးဖိုထိပ်တန်းဗားရှင်း!
အိုငျးရဈ Soda Bread - ဟင်းချိုနှင့်စွပ်ပြုတ်များအတွက်အကောင်းဆုံး။
Colcannon စာရွက် (ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အာလူး) - အဆုံးစွန်သောနှစ်သိမ့်မှုအစားအစာ။
ငါ့အကြိုက်ဆုံးရုဗင် Sandwich က - အိမ်လုပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အနှေး cooker ထောပတ်အမဲသားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၈ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၈ နာရီ ၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly N. ဒီ Corned Beef and Cabbage Slow Cooker စာရွက်သည်ထောပတ်အမဲသား၏အရသာရှိရှိသမျှကိုသူ့ဟာသူချက်ပြုတ်သည့်အစာအဖြစ်ထုပ်ပိုးထားသည်။ စိန့်ပက်ထရစ်နေ့သို့မဟုတ်ယခုနှစ်မည်သည့်နေ့၌မဆိုကောင်းသောကံကြမ္မာအကြောင်းပြောဆိုပါ။
▢၁ corned အမဲသား brisket 3-4 ပေါင်
▢၃ လေးညှင်းပွင့် ကြက်သွန်ဖြူ
▢2 ½ -3ခွက် ရေ
▢နှစ် အလေးချိန်ပေါင် အာလူး အခွံ & quartered
▢နှစ် မုန်လာဥနီ ကုန်တယ်
▢၁ ဂေါ်ဖီထုပ်၏သေးငယ်တဲ့ ဦး ခေါင်း ပြင်ဆင်ပြီးသုံးသို့ဖြတ်
ကြက်သွန်နီကိုအတုံးကြီးများခုတ်ပြီး ၆ qt နှေးကွေးသောမီးဖို၏အောက်ခြေတွင်ထားပါ။ corned အမဲသားနှင့်အရသာ packet ကိုအတူထိပ်တန်း။
နိမ့်ကျ 8-10 နာရီပေါ်ကွတ်။
ကန ဦး ၃ နာရီပြီးနောက်အာလူးနှင့်မုန်လာဥနီကိုချက်ပြုတ်သူနှေးအောင်ထည့်ပါ။
နှေးသောချက်ပြုတ်စက်မှပြောင်းဖူးအမဲသားကိုဖယ်ရှားပြီးမဖြတ်ခင် ၁၅ မိနစ်လောက်ငြိမ်ထားပါ။ အာလူး, မုန်လာဥနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့်သင်၏အမဲသားသည်နူးညံ့သောနေရာဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့ corned အမဲသားနူးညံ့သည်မဟုတ်လျှင်, ပစ္စည်းကကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်, ကကြာကြာချက်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်၏ပြောင်းဖူးအမဲသားကိုစပါးအနှံ့ဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပေးထားသောအာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းများအမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
သော့ချက်စာလုံးcorned အမဲသားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ် သင်တန်းညစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ဒီအနှေး cooker စာရွက် REPIN
ရုဗင် Sandwich Slider